Deni oo kulamo wadatashi ah bilaabay ka hor safarkiisa Dhuusamareeb - Awdinle Online
Deni oo kulamo wadatashi ah bilaabay ka hor safarkiisa Dhuusamareeb
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa kulan xog wareysi iyo wadatashi isugu jira oo ku saabsan xaaladda Dalka marayo la yeeshay qeybaha kala duwan ee Masuuliyiinta, Siyaasiyiinta, Aqoonyahannada , Waxgaradka iyo Ururada Bulshada ee Puntland.
Kulanka oo uu dalbaday Madaxweyne Deni ayaa waxaa looga hadlay xaalada Siyaasadeed ee dalka gaar ahaan Arrimaha doorashooyinka dalka oo aan weli hehsiis laga gaarain.
Kulanka ayaa labada dhinac waxaa ay uga tashanayeen shirka uu Madaxweynaha Puntland uga qeyb-galayo magaalada Dhuusamareeb, kaas oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa la filayaa in saacadaha soo socda uu u safro magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, halkaas oo ay kulan isugu imaanayaan Madaxda Dowladda & dowlad Goboleedyada, iyad aoo looga arrinsanaya xalka gaarista khilaafka doorashooyinka.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ka hadlay weerarkii Hotelka Afriik
Next articleRW Rooble oo ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab